नेपालगन्ज- शान्ति, सद्भाव र एकता राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मुल नाराको साथ नेपालगन्जमा शनिवार भएको पाँचौ धारा नेपालगन्ज म्याराथन दौडमा फुुल म्याराथान दौडतर्फ विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबका नवराज साउँदले प्रथम भई नगद पैसठी हजार जित्न सफल भएका छन् । उनले निर्धारित ४२ किलो मिटरको दुुरी २ घण्टा २५ मिनेट ४२ सकेन्डमा पार गरेका थिए । दोस्रो स्थानका खगेन्द्र [पूरा पढ्नुहोस्]
कोहलपुर, बाँके- स्व. लोक बहादुर थापा मगर स्मृति रनिङ शिल्ड क्रिकेट प्रतियोगिता कोहलपुरमा शुरु भएको छ । शनिबार एक कार्यक्रम गरि स्वर्गीय थापाका श्रीमती लालसरि थापा मगरले क्रिकेट एम्पायर ईनामुदिन हल्वाई र राजेन्द्र मान्धरलाई बल हस्तान्तरण गरि उद्घाटन गरिएको हो । शनिबार भएको उद्घाटन खेलमा कोहलपुर एकेडेमी बिजयी भएको छ । उसले जेगवार स्पोर्टस क्लबलाई ८९ रनले पराजित गरेको हो । [पूरा पढ्नुहोस्]
नेपालगन्ज (बाँके) – आमा गुमाएका चेलिहरुको आज नेपालगंजमा भएको भेलाले प्रदेश सांसद कृष्णा केसी नमुनाको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय आमा गुमाएका चेलीहरुको संजाल गठन गरेको छ । जसको उपाध्यक्ष किरण आचार्य, सचिवमा साबित्री गिरी, सहसचिवमा बिजया धिताल र कोषाध्यक्षमा तारा खत्री रहेका छन । त्यसैगरी सदस्यहरुमा लता शर्मा ,जयन्ती खत्री ,नारायणी रुपाखेती ,अक्षरी पोखरेल ,गणेशा कार्कि ,मिना मल्ल [पूरा पढ्नुहोस्]
पोखरा- नेपाल युवा परिषद कास्की जिल्लाको आयोजनामा दुई दिने प्रदेश स्तरीय युवा सम्मेलन शुरु भएको छ । दुई दिनसम्म चल्ने सो सम्मेलनको उदघाटन कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्रमुख अतित्थतामा भएको थियो भने जिल्लाका अध्यक्ष मोनिका रानाभाटको अध्यक्ष्तामा सम्पन्न भएको थियो । सो कार्यक्रमको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले युवा परिवर्तनका [पूरा पढ्नुहोस्]
सोम गुुरुङ/बैजनाथ (बाँके) । साथी संस्थाको आयोजनामा एक दिने मानव बेचविखन विरुद्धको ऐन, रेफरल प्रणाली तथा बैजनाथ गाउँपालिकाको रणनैतिक कार्ययोजना बारे अभिमुुखीकरण गरिएको छ । बालबालिका बेचविखनको विरुद्धको परियोजना कार्यक्रम संयोजक दिपकमान श्रेष्ठले परियोजनाको उद्धेश्यबारे प्रष्ट पारेका थिए । प्लान नेपाल ईन्टरनेशनल नेपालगन्जका बाल संरक्षण अधिकृत कमला राईले प्लान नेपालले [पूरा पढ्नुहोस्]
नेपालगञ्ज (बाँके) । आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तरगत नेपालगन्जमा जारी हकी प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्वल र त्रिभुवन आर्मी क्लव फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । नेपालगन्जस्थित मंगल प्रसाद (एम.पी.) माध्यमिक विद्यालयको खेलमैदानमा भएको प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ५–४ गोलले पराजित गरि पुलिस र प्रदेश ५ लाई ट्राईबेकरमा पराजित गरि आर्मी फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन् । [पूरा पढ्नुहोस्]
संरक्षकले दिलाए एनआरएनएलाई पहिलो स्वर्ण बैशाख २, बर्दिया । आठौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत १५ औं राष्ट्रिय लनटेनिस प्रतियोगितामा एनआरएनए (अस्ट्रेलिया) का संरक्षकभूषण वज्राचार्यले टोलीलाई सोमबार पहिलो स्वर्ण दिलाएका छन् । बुटवलमा भएको पुरुष सिंगल्स फाइनलमा संरक्षकले आर्मीका प्रणव खनाललाई ६–१ र ६–२ को सोझो सेटमा पराजित गरे । गण्डकीका प्रदीप खड्का र एपीएफका सन्तोष खत्री [पूरा पढ्नुहोस्]
विश्वराज पछल्डङ्ग्या/बाँके । आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तरगत शुक्रवार भएको पुरुष हक्की प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं. २ ले बराबरी अंक बाँडेका छन् । प्रतियोेगितामा गण्डकी प्रदेशका खेलाडी राजन नेपालीले खेलको ३९ औँ मिनेटमा पहिलो गोल गरे । उत्रीय पनि खेलको अन्यतिर प्रदेश नं. २ का अर्जुन खड्काले ५१ औँ मिनेटमा गोल गरेपछि खेल बराबरीमा रोकियो । त्यसैगरि [पूरा पढ्नुहोस्]